Halyayga Man United Ee Gary Neville Oo Hadda Ka Hadlay Fikradiisa Dhacdadii Jamie Carragher Looga Joojiyay Shaqada Champions League-ga. – GOOL24.NET
Halyayga Man United Ee Gary Neville Oo Hadda Ka Hadlay Fikradiisa Dhacdadii Jamie Carragher Looga Joojiyay Shaqada Champions League-ga.
Halayyga Manchester United ahna khabiirka Sky Sports ee Gary Neville ayaa ka hadlay fikradiisa ku aadan dhacdadii foosha xumayd ee uu ku kacay saaxiibka ay shaqo wadaagta yihiin ee Jamie Carragher intii lagu jiray dhamaadkii kulankii Old Trafford ee Manchester United iyo Liverpool markaas oo Jamie Carragher uu isaga oo cadhaysan candhuuf ku tufay inan yar oo 14 sano jir ah oo taageere Man United ah.
Jamie Carragher oo qayb ka ahaan lahaa teamka TV3 ee garoonka Old Trafford ku falan qayn lahaa kulanka Manchester United iyo Sevilla ee UEFA Champions League ayaa liiska looga saaray dhacdadan inkasta oo uu raali galin buuxda ka bixiyay isla markaana uu la xidhiidhay qoyskii ay inanta yari ka dhalatay.
Laakiin Jamie Carragher ayaa taageero ka helay halyayga Man United ee Gary Neville kaas oo aqbalay raali galinta uu Carragher bixiyay wuxuuna sheegay in dhacdadani tahay mid gaar ka ah waxyaabaha kale isla markaana ay tahay in ay shaqadooda sii wada wataan oo ayna wax yeelayn arintani.
Gary Neville ayaa hadda bartiisa twitterka kaga dareen celiyay dhacdadan wuxuuna yidhi: “Hadda waxaan daawaday Carr23 oo raali galin bixinaya. Wax cudur daar ah kamuu bixin qaladka wayn ee uu sameeyay, isagu si wayn ayuu dul qaad ugu leeyahay kubbada cagta, calaamada ayuuna ka gudmay waxaana waajib ahayd in aanu ka falcelin”.
Gary Neville ayaa hadalkiisa sii raaciyay taageero uu u muujiyay Carragher wuxuuna yidhi: “Anigu saddex sano ayaan TV-ga isaga kula soo jiray, fifrad ahaan dhacdadan gaarka ahi waa in ayna anaga naga joojin in aanu wada shaayno”.
Jamie Carragher ayaa xaqiijiyay in uu hore u raali galiyay qoyska uu falka xun kula kacay isla markaana uu markale raali galin doono waxaana hadalkiisii ka mid ahaa“Markale ayaan la hadli doonaa qoyska maanta isla markaana xalay ayaan iyaga la hadlay. Waan raali galiyay, dabcan waxay ahayd wax dhaqan ka baxsan. Maanta ayaan markale raali galin doonaa”.